Maxaa diiradda lagu saarey shirkii golaha wasiiradda Puntland?
GAROWE, Puntland - Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Shir-guddoomiyey Shirka Golaha Wasiirada ee Dowladda Puntland oo ku qabsoomay Aalada maqalka iyo muuqaalka la isaga arko ee (Zoom).
Shirka Golaha Wasiirada waxaa todobaadkan looga hadlay Amniga, Xaaladda Covid-19, Imtixaanaadka Shahaadiga ah ee Puntland iyo nabadeynta beelaha.
Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta ee Dowladda Puntland ayaa Golaha la wadaagtay xaaladda Amniga guud ee Puntland oo wanaagsan, iskaashiga amni ee Puntland iyo Galmudug iyo qorshaha tayeynta ciidamada ee ka socda Gobolka Mudug.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa Golaha la wadaagtay xaaladda Covid-19 ee Puntland, waxay Wasaaradu sheegtay in uu jiro hoos u dhac dhinaca kiisaska ah, Wasaaradda ayaa soo jeedisay in weli loo baahanyahay in ay sii jirto xaaladda feejignaanta ah oo bulshadu is illaaliso iyagoo raacaya talooyinka caafimaad.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowladda Puntland waxay Golaha la wadaagtay diyaar-garowga ugu danbeeyay Imtixanaadka oo ardeydu u fariisan doonto subaxda sabtida 04 Luulyo 2020. Ardeyda Imtixaanka waxaa u fariisan doona 16,500 oo ardey, 5,447 ardey waa Dugsiga Sare halka 11,053 ardey ay u fariisan doonaan Imtixaanka fasalka 8-aad.
Imtixaanaadka oo lagu qaban doono 132 goobood oo ku yaalla deegaanada Puntland, waxaa dhinac socda taxadar ku saabsan cudurka covid-19, iyadoo la diyaariyey in ardeydu ay helaan qalabka ka hortaga covid-19 , dareeraha jeermiska dila iyo in lala socdo heerka xumadooda.
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ayaa Golaha la wadaagtay xaaladda caafimaad ee xoolaha Puntland, qorshayaasha guuleystay ee lagu talaalay xoolaha iyo in la diyaariyey gaadiid daawooyinka xoolaha ugu geeyo dhulka fogfog si loo hubiyo xaaladda caafimaad ee xoolaha.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dimuqraadiyeynta Puntland ayaa Golaha la wadaagtay shirarka nabadeynta ee ka socda Galdogob iyo Cawsane-Sanaag, kuwaasi oo meel wanaagsan maraya. Sidoo kale waxay Wasaaraddu Golaha la wadaagtay in uu bilowmayo mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee (JPLG).
Ugu danbeyn Goluhu wuxuu bogaadiyey sida ay u socoto howsha dayactirka wadada isku xirta Boosaaso iyo Garoowe oo hadda la dhisay 4-tii KM ee ugu horeysay, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa hore u balan qaaday in Dowladdu dayactirayso wadooyinka ku burburay roobabkii sanadka ka da'ay Puntland.
Taliyihii ciidanka Isku-Dhafka Gaalkacyo oo la dhaawacay
Puntland 12.05.2019. 00:43
Xaaladda goobta ayaa isku bedeshay kala carar iyo cabsi kadib weerarka.
Meydka Gabar 12 jir ah oo la raadinayay oo laga helay Gaalkacyo
Puntland 25.02.2019. 14:03
Mas'uul isku day dil kaga badbaadey magaaladda Gaalkacyo
Puntland 05.04.2020. 12:00
Deni oo bogaadiyey doorka dhalinyarada ee horumarka Puntland
Puntland 23.05.2019. 08:09
Madaxweyneyaasha Puntland iyo Galmudug oo ku kulmay Gaalkacyo
Puntland 26.06.2020. 12:11
Gaas oo kala diray Golihii deegaanka Gaalkacyo, kuwa kalena magacaabey
Puntland 17.11.2018. 18:19
Aabe Ilyaas Aadan: Xukunka kiiska Caasha waa dhamaadkii kufsiga
Puntland 23.08.2019. 16:31
Kenya oo shaacisay mowqifkeeda safiirka ay eriday Soomaaliya 30.11.2020. 13:04
Maxay ahayd fariinta uu Qoorqoor la wadaagay Midowga Murashaxiinta? 30.11.2020. 12:03
Wiil ay haweenay Soomaali ah u dhashay dagaaleme ISIL oo la dilay 30.11.2020. 11:15
Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Kenya 30.11.2020. 10:10
Is-afgarad muhiim ah oo dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan 30.11.2020. 09:03
Mahad Salaad: Farmaajow Kenya ayaa cadow nagu ah cod ku heli meysid 30.11.2020. 08:50